🥇 ▷ Qaabka mugdiga ah ee AMOLED ee Twitter ayaa dib u dhigay si uu u liito khibradda ✅
Qaabka mugdiga ah ee AMOLED ee Twitter ayaa dib u dhigay si uu u liito khibradda
Imisa jeer ayaan kaala hadalnay qaabka modeelka madow ee barnaamijka Android Pro? Waqti kasta codsi caan ah ama muhiim ah wuxuu ku darayaa habka mugdiga ah, waxaan kugu wargalinaynaa waqtiga. Twitter Waa mid ka mid ah codsiyada hormuudka ah ee habkan mugdiga ah, maxaa yeelay Muddo sanado ah, waxay siisaa isticmaaleyaasheeda suurtagal in la isticmaalo istiraafi cad, oo midabka ugu sareeya caddaan yahay; ama interface mugdi ah, oo leh midab buluug mugdi badan leh. Isticmaalayaal badan ayaa weydiistey xaalad mugdi ah xaaladaha iyadoo Twitter-ka la wadaagay bishii Maarso isbeddelada ku imaan doona barnaamijka.
Iyada oo sii kordheysa isticmaalka taleefannada leh bandhigyada AMOLED, habka mugdiga ah ee ku dhex jira codsiyada ayaa macno badan u leh sidii hore. Shaashaddaan, iyo waxyaabo kale, waxay u muuqdaan inay leeyihiin madowyo qoto dheer, maxaa yeelay pixel kasta waa la dami karaa shaqsi ahaan, taasoo keenta midabka madow, macnaheedu waa in shaashadda dansan tahay. Sababtaas awgeed, midabka madow ee kujira shaashadda AMOLED ma cuno batari, halka ay ka mid tahay IPS, haa, wali waa la laalaabaa. Haddii aad sugeysay qaabka mugdiga ah ee shaashadaha AMOLED ee Twitter, ka xumahay inaan kuu sheego in si rasmi ah loo daahay
Qaabka guud ee mugdiga ah ee Twitter ayaa loo daahi doonaa si loo hagaajiyo
Waxaa laga joogaa nus sano tan iyo markii ay Twitterku ku dhawaaqday imaatinka guud ahaan mugdiga ah ee arjigiisa laakiin wali ma aanan awoodin inaan tijaabinno. Hadda Waxaan ognahay in imaatinkaagu goor dhow noqon doono, sababta oo ah mid ka mid ah maareeyayaasha shabakadan bulshada ayaa soo daabacay farriin tweet ah oo ku saabsan daahitaankiisa si loo fahmo faahfaahinta qaar, laakiin taasi waxay imaan doontaa waqti dhow. Waxa ugu wanaagsan ayaa ah inaan awood u helnay shaashadda sida qaab cusub ee mugdiga ah ee dalabka uu u ahaan doono, kaasoo u roon dadka isticmaala taleefannada leh shaashadaha AMOLED iyo batteriga noloshiisa.
Cusboonaysiinta “Hillaacyada Iftiinka” ee loogu talagalay Android: Muuqaalka ayaa soo socda dhowaan, laakiin dib ayaa loo dhigay waxoogaa ah markii aan ka shaqeyneyno hagaajinta khibradda. Waa tan shaashadda dhismaha hadda jira. Waxaan rajeyneynaa inaan ku hello muuqaalkan aadka u sareeya ee isticmaalayaasha Android. Waxaan kaaga mahadcelineynaa dulqaadkaaga. pic.twitter.com/D8kaDqKEU6
– Dantley Davis (@dantley) Sebtember 11, 2019
Runtu waxay tahay in aysan bixin sharraxaad dheeri ah oo arrintan la xiriirta, laakiin xaaladda noocan ah ayaa naga dhigeysa su’aal haddii ay adag tahay in la hirgaliyo habka mugdiga ah ee dalabka ah. Waxaan fahamsanahay inaad u baahan tahay inaad midabada u badasho waxyaabo badan, laakiin, kugu filan inaad dib u dhigto soo bandhigiddeeda in ka badan nus sano tan iyo markii lagu dhawaaqay rasmiga ah? Tanina maahan inaan kahadalnay taleefanka isku laabma.
Twitter Uguyaraan hadda waxay wali siisaa qaabkeeda mugdiga ah ee hadda jira, oo ka duwan mid kale oo ka mid ah codsiyada hadda saameynta badan leh, kaas oo in kasta oo aan ku aragnay noocyada beta, wax aan wali la aqoonin: WhatsApp. Ujeedadu waa taas horumariyeyaashu waa inay dhageystaan ​​adeegsigooda. Haddii codsiyada qaybaha saddexaad ay ku guuleystaan ​​inay tan sameeyaan, oo leh daraasado horumarineed oo aad u yar, sidee shirkad milyaneer dollar ah u guuldaraysaa?